Madaxwayne Gaas oo ka hadlay khilaafka masuuliyiinta DFS
November 2, 2014 (GO)- Madaxwaynaha dowladda Puntland Cabdiwali Cali Gaas oo maanta dib ugu soo laabtay magalada Garowe ayaa wax laga waydiiyay khilaafka masuuliyiinta Dowladda Federaalka u dhaxeeya.
Dr.Gaas ayaa sheegay inuusan wax badan kala socon khilaafka ka aloosan Villa Somalia hase yeeshee hadduu jiro uu saameyn ku yeelan doono Puntland waa sida uu hadalka u dhigay.
''Waxa la isku hayo waxay ku salaysan yihiin ma hayo, laakiin waxaan rajaynayaa khilaaf dan ma ahan, Soomaaliyana wanaag uma ahan, Annaga iyo wada shaqaynta DFS khilaaf halkaasi hadduu ka jiro dan uma ahan, marka waxaan jeclaan lahaa khilaafka in lagu dhameeyo Dastuurka'' Gaas ayaa sidaasi sheegay shir jaraa'id uu madaxtooyadda ku qabtay.
Khilaafka u dhaxeeya madaxwaynaha iyo Ra'iisul Wasaraha Somalia ayaa sii xoogaystay ka dib markii asbuucii hore uu Cabdiwali Shiikh Axmed isku shaadheyn ku sameeyay qaar ka mid ah gollihiisa wasiiradda.
Arrimaha kale uu Gaas shirka jaraa'id kaga hadlay waxaa ugu muhiim sanaa shirarkii ka dhacay London iyo Dubai oo looga hadlayay maalgashiga Africa iyo la-dagalanka burcadbeeda.
Soo dhawaynta wafdiga madaxwaynaha Puntland waxaa ka qayb galay madaxwayne ku xigeenka iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan gollayaasha dowladda.